China Heat Pipe Air Preheater Vagadziri uye Vanotengesa | Dongfang
Zvakanakira Heat Pipe Air Preheater 1. Flue gasi nemhepo zvakadzorerera kuyerera munzira yakatwasuka kuti iite mhepo-mweya kupisa kuchinjana, izvo zvinonyanya kugadzirisa utsi-yemhepo kupisa kuchinjanisa mwero. 2. Yedu pombi-mhando yemhepo preheater ine bhokisi, kupisa pombi bundle uye yepakati dummy ndiro. Zvinotora zvakanakira kukurumidza kupisa kupisa kukurumidza uye kupisa kwakanyanya kupisa kushanda kukurira dambudziko rekudzikira kwekushisa kupisa mwero. 3. Iyo yekumusoro yekumadziro kupisa kupisa nzvimbo yemapeto ese ari maviri epombi yekupisa anoshandisa maini kuwedzera, ...
Zvakanakira Heat Pipe Air Preheater
1. Flue gasi nemhepo inodzosera kuyerera munzira yakatwasuka kuti iite mhepo-mweya kupisa kuchinjana, iyo inonyatsovandudza utsi-yemhepo kupisa kuchinjanisa mwero.
2. Yedu pombi-mhando yemhepo preheater ine bhokisi, kupisa pombi bundle uye yepakati dummy ndiro. Zvinotora zvakanakira kukurumidza kupisa kupisa kukurumidza uye kupisa kwakanyanya kupisa kushanda kukurira dambudziko rekudzikira kwekushisa kupisa mwero.
3. Iyo yekumusoro yekumadziro kupisa kupisa nzvimbo yemapeto ese ari maviri epombi yekupisa inoshandisa maini kuwedzera, saka kusimbisa kunze kwepombi kupisa kupisa, kunyatso kuderedza huremu, uremu, uye kuchengetedza simbi inopedzwa.
4. Pipe-mhando yemhepo preheater inoisirwa boiler kuti iwedzere iyo inopinda mweya tembiricha kupfuura anopfuura 150 ° C. Iyo yekuwedzera inodziya mweya preheater tembiricha yakanaka kuti vheni mafuta kupisa, nekudaro kuwedzera hura tembiricha uye zvakafanana kuderedza kushandiswa kwemafuta. Izvi zvinowedzera simba rekushisa kweiri boiler kune zvinopfuura 70%.
Performance ye Heat PipeAir Preheater
1. Kuiswa nyore: hapana kudikanwa kwekushandura boiler kana yeyunivhesiti choto.
2. Kuvimbika kwemusangano: inoshandisa yepakati dummy plate saka iyo inotonhora uye yekudziya yekupisa yakaparadzaniswa zvachose kubva kune mumwe nemumwe. Imwe pombi inopisa yekuparadza haigoni kukanganisa mweya preheater uye yakazara kupisa kupisa kushanda.
3. Yakaderera vhoriyamu: ine compact dhizaini uye yakanyanya kupisa yekudziya maitiro, iwo anotonhora uye anopisa emhepo pombi pombi shandisa yemhepo mafini kuti awedzere nzvimbo yemukati sekudikanwa.
4. Corrosion kuramba, shoma guruva: simba rekutapurirana kwekupisa pombi rinogona kuchinjirwa kudzora kupisa tube tembiricha nekudzivirira kutu kwe acid dew-point.
5. Hurefu hwekushumirwa hupenyu: kupisa pombi yemhepo preheater ine makore anopfuura gumi 'ebasa rehupenyu, nekugadzirisa kuri nyore uye nemutengo wakaderera.
Yapfuura: Reformer Tube
Inotevera: Flue Damper
Kuvhiringidza Kuyerera Kwemhepo Preheater
Cast -iron Yakapedzwa Mhepo Preheater
Rail Transit , Kuderedza Block , Malo Chikamu cheKuisa , Ironworks , Railway Kukurukura , Chill Mvura Muchina ,